Fanetsiketsehana fitadiavam-bola fanampiny Commission Amin'ny maha-Insurance Agent
Bhose Jolay 7, 2016 Asongadina, General Tsy asian-teny
Lasa ny fiantohana mpandraharaha na ny mpivarotra dia tena mora ary tena be karama raha toa ka ianao vonona ny hametraka eo amin'ny ezaka takiana mba hahazoana Mitana ny vola miditra ao amin'ny raharaham-barotra. Ankoatra ny solika sy ny entona orinasa, bola sy ny banky orinasa, ary ny fifandraisan-davitra orinasa, sehatry ny fiantohana dia faritra iray dia afaka manao tsara ny vola toy ny fiantohana mpandraharaha / mpivarotra na orinasa sampan-draharaha.
Zava-tsarotra eo amin'ny maha-mpandraharaha fiantohana
Ny fanamby lehibe amin'ny maha mpandraharaha dia ny fiantohana fa ny varotra asa. Tsy maintsy mivoaka fanantenana ho an'ny mpanjifa, izay mety tsy ho liana amin'ny zavatra tsy maintsy mivarotra - fiantohana fonony. Ny ankamaroan'ny olona no resy lahatra momba ny fiantohana ary mihevitra izany ho hosoka, ary izany dia mivelatra skeptism ny fiantohana ny mpivarotra. Ny ankamaroan'ny mpiasan'ny fiantohana tsy maintsy manao mangatsiaka antso amin'ny alalan'ny nandondom-baravarana sy manakaiky ny olona na aiza na aiza; ary ny ankamaroany mahazo "tsia" ny valiny, fa tsy ny "eny".
Tsy ho an'ny osa fo, ary tsy maintsy ho afaka kibony ompa sy ny fanilikilihan'ireo na ny fifanarahana amin'ny be ny rava fanazavana mba hahazoana ny karama bebe sy ny asa nanirahana azy amin'ny faran'ny volana. Zava-tsarotra iray hafa dia mba ho antenaina mba hivarotra ny namana sy ny fianakaviana - sy ny fahamarinana ho nilaza, dia tsara ny manomboka amin'ny azy ireo mba hahazo ny hifaharana ny fomba hiatrehana ny olona ao amin'ny raharaham-barotra.
Insurance Agents sy ny fomba miasa ho amin'ny fanompoana ny zavatra ilaina
Inona avy ireo fepetra takina iray fiantohana mpandraharaha?
Ny zavatra tsara mikasika ny maha mpandraharaha ny fiantohana dia tsy tokony ho matihanina na pianarana fahaizana mba ho tonga iray. Na iza na iza dia afaka ho lasa mpandraharaha ny fiantohana. Ny ankamaroan'ny mpiasan'ny fiantohana tsy misy fianarana. Marina fa oRINASA MPIANTOKA afaka mangataka ny mpiadina ho nahazo diplaoma, fa mahomby indrindra mpiasan'ny fiantohana ihany kolejy nahazo diplaoma na ny sekoly ambaratonga faharoa.
Ny fototra marina dia ny ankamaroan'ny orinasa fiantohana manana fampiofanana anaty fandaharana ho an'ny mpiasa izy ireo mety mampiasa tahaka ny salespeople. Tsy maninona, raha Hianao no nahazo diplaoma oniversite, na ny sekoly ambony dropout, na manana traikefa varotra amin'ny orinasa fiantohana hafa - dia mbola ho fiofanana amin'ny alalan'ny mpampiasa vaovao eo anatrehanao miasa na nalefa any an-tsaha. Raha any Etazonia, dia mety ho ilaina ny zava-panjakana fanadinana ary mahazo fahazoan-dalana eo anatrehanao mampihatra toy ny fiantohana mpandraharaha.
Ny hany mety mpampiasa toetra izay te-hahita anao, ary izay tena mila ny fahombiazana eo amin'ny asa dia: tsara fanahy, ny extrovert toe-tsaina, fahaizana hiatrehana fanilikilihan'ireo ary handresy lahatra ny olona, ny tenacious fanahy, ary ny faniriany voajanahary fotsiny noho ny fiarahany nanipy baolina sy ny famaranana varotra efaha. Rehefa manana ireo toetra ireo, ary fatra-paniry laza ianao mba hahomby sy haneho famantarana ny mitroka fanofanana lesona, Ary ny mpampiasa tsy mandinika ny toetra alohan'ny handraisana mpiasa anao.
Ohatrinona no mahazo vola mpiasan'ny fiantohana?
Voalohany indrindra, dia tsy maintsy ho nilaza fa mpiasan'ny fiantohana dia tena karama komisiona fa tsy karama. Ny miasa mafy mpivarotra fiantohana dia mahazo mihoatra amin'ny naniraka noho ny amin'ny karama, ary izany no fototry ny rehetra ny asa. Ny vola no mahazo miankina amin'ny fanjakana na ny firenena, ny napetraka isan-jato ny asa isaky ny mpanjifa no mandresy, sy ny tsara ianareo dia afaka ny handresy mpanjifa vaovao isan-kerinandro, na isam-bolana. Fa ao amin'ny US, ny miasa mafy mahazo fiantohana mpandraharaha eo ho eo amin'ny $ 100K isan-taona, ary izany dia zavatra.
Ankoatra ny komisiona, mpiasa sasany ihany koa ny mahazo karama fototra mba hiaro azy ireo handeha. Azo atao koa mba hahazoana vola avy amin'ny toro-hevitra izay manampy ny mpandraharaha mpanjifa amin'ny drafitra ara-bola sy ny matihanina torohevitra. Ireo fiampangana service handeha lavitra amin'ny fanampiana ny mpiasa mba hanohana ny tenany raha mbola nanompo ny zavatra ilain'ny mpanjifa sy ny mpampiasa na.
By Bhose Martsa 29, 2013
Insurance Azon'ny mpisolovava sy Litigation Claims
By Bhose Martsa 25, 2013
By Bhose Jona 10, 2013
Fanetsiketsehana fitadiavam-bola fanampiny Commission Amin'ny maha-Insurance Agent…